Somaliland: Muqdisho Marti ugama Nihin Qaadhaanka Midowga Yurub • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Somaliland: Muqdisho Marti ugama Nihin Qaadhaanka Midowga Yurub
Somaliland: Muqdisho Marti ugama Nihin Qaadhaanka Midowga Yurub
Wasaaradda qorshaynta ee Somaliland ayaa warasaxafadeed ay soo saartay waxay dowladda Federaalka ee Somaliya uga digtay in ay ka waantowdo siyaasadaynta qaaraanka iyo mashaariicda ay ku deeqaan Dawladaha deeqaha bixiya.
Warasaxafadeedka waxaa lagu sheegay in dowladda Federaalku ayna marna wakiil uga noqon karin Somaliland deeqaha Caalamiga, islamarkaana ayan maamulin degaanada Somaliland.
Warsaxafadeedka Somaliland ayaa jawaab u ahaa heshiis ay dowladda Federaalka iyo midowga Yurub ay ku kala saxiixdeen magaaladda Muqdisho, kaasi oo lagu hormarinayo Magaalooyinka Muqdisho iyo Berbera.
Heshiiskan oo dhinaca dowladda federaalka uu u saxiixay Wasiirka Qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya, Jamaal Maxamed Xasan, iyo agaasimaha guud ee midawga Yurub ee horumarinta caalamiga ah, Mr Stefano Manservisi waxaa goobjoog ka ahaa Ra;isul wasaaraha xukuumadda Federaalka Xasan Cali Khayre.
Lacagta ku baxaysa mashaariicdan ayaa ah 23 Milyan Yuuro oo 15 milyan ka mid ah lacagtaasi waxaa lagu maal gelinayaan mashruuca horumarineed ee Eng. Yariisow oo lagu dhisayo wado 17 Km oo ka qayb qaadanaysa horumarinta magaalada Muqdisho, Halka 8 Milyan oo dollar lagu maalgalinayo xoojinta awooda dowladda hoose ee Berbera iyo mashariica la xiriirta dhalinyarada.